PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Saze safihlelwa okuhle obekwenziwa umama uWinnie
Saze safihlelwa okuhle obekwenziwa umama uWinnie
Zakhele Mkhabela EJOZINI MHLELI: Kwelakho iphephandaba eliwela umfula ugcwele, ngivumele ngibeke ilaka lami ngesenzo esingesihle esenziwa yithina bantu. Le nsila yesisho esithi “umuntu ubongwa esefile” ayifuni ukusuka kithina bantu, ikakhulukazi abamnyama. Kuvamile ukuthi uma umuntu esaphila, sitshelwe okubi kodwa ngaye, kuyothi angahamba emhlabeni bese kuvumbuka izinto ezinhle ngaye ebesingazazi siwumphakathi ngoba bezigodliwe.
Ngiphatheke kabuhlungu uma sengizwa umlando kamama ohloniphekile, uNomzamo Winnie Madikizela-Mandela (osesithombeni), ubumnene bakhe, impokophelo, isibindi, uthando nobuhlakani abenakho esaphila kodwa esingazange satshelwa ngakho.
Nabantu abebekhuluma kabi ngomama uWinnie, bemethuka manje sebekhuluma kahle sebesitshela ubuhle bakhe. Ngiyazibuza ukuthi ubengabongwa ngani esaphila na? Kungani kufanele aze afe kuqala umuntu bese ebongwa na? Nezakhiwo nemigwaqo kumele kulindwe umuntu afe bese-ke sekuqanjwa isakhiwo leso noma umgwaqo ngegama lakhe.
Kungani kufanele afe kuqala? Uyabona nje okade engumengameli, njengamanje uyiqaqa kwabaningi kodwa uma engaguqa namhlanje, ungabezwa sebemtusa besho okuhle ebesingakwazi ngaye. Umuntu impela yincwadi engafundeki.
Ukubonga umuntu kuyamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokwenza okuhle nakuba kungesibo bonke abantu abenza izinto ezinhle ngoba befuna noma belindele ukubongwa. Kodwa kuyinto enhle ukubonga nokuthi sazi ngezinto ezinhle ezenziwe ngumuntu ikakhulukazi osebuholini bomphakathi.
Ukube sasinalo ulwazi ngalo mlando kaNkk MadikizelaMandela ngiqinisile ngithi ngabe sibaningi athe ehamba sabe sesifikile kuye sazibongela kuye samxhawula ngesibindi sakhe nangeqhaza alibamba emzabalazweni wenkululeko yalelizwe. Yebo inkululeko yethu kuleli zwe ayiphelele kodwa nakuba kunjalo singelithele amanzi iqhaza elabanjwa ngabantu abafana nomama uWinnie. Mhawukeli Ngubane EMKHAMBATHINI